Guddiga Badbaadinta Qaxootiga ee Muqdisho oo Lacag 50,000 ku Wareejiyey Mu'sasada al-Minhaaj(Sawirro) | SAHAN ONLINE
Guddiga Badbaadinta Qaxootiga ee Muqdisho oo Lacag 50,000 ku Wareejiyey Mu’sasada al-Minhaaj(Sawirro)
Munaasabad lagu wareejinayey deeqdaan lacageed oo lagu qabtay xafiiska guud ee mu’asasada al-minhaaj ayaa ugu horayntii waxaa ka hadlay Sh. Maxamed Macalin Axmed oo ka mid ah culimada soomaaliyeed wuxuuna tilmaamay in guddiga badbaadinta qaxootiga Yemen ee Muqdisho ay soo gaarsiiyeen lacag dhan 50,000$ ( konton kun oo doolar) ,oo ay ugu talagaleen in lagu gargaaro qaxootiga Yemen ka soo qaxaya ee tabaalaysan ayna ku wareejinayaan gudiga u xilsaaran gurmadka qaxootiga Yemen ee Puntland.
Sh.Maxamed Macalin ayaan uga mahad celiyey gudiga badbaadin qaxootiga magaalada Muqdisho ee uu hormuudka u yihiin Culimada Sh.Nuur Baaruud iyo Sheekh Bashiir Axmed Salaad. Deeqdaan lacageed oo ay soo gaarsiiyeen Gudiga taakulaynta Qaxootiga dalka Yemen iyo Culimada Puntland , wuxuuna tilmaamay in deeqadani ay tilmaan wayn u tahay midowga ,isku danqashada iyo walaaltinimada umada soomaaliyeed loona baahan yahay in la sii laba jibaaro .
Sheekha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ugu baaqay Madaxda Dowlada federalka Soomaaliya ah in ay kaalintooda ka qaataan u gargaarida qaxootiga taabaalaysan ee kasoo qulqulaya dalka Yemen iyaguna mas’uulka yihiin lagana sugayo masuuliyadoodii in ay ka soo baxaan.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha mu’asasada alminhaaj Maxamed C/laahi C/lle oo ugu horayntii uga mahad celiyey gudiga bad baadinta qaxootiga soomaaliyeed ee Muqdisho lacagtaan ay soo gaarsiiyey culimada iyo gudiga gurmadka ee Boosaaso, isagoo aad ugu bogaadiyey juhdiga ay bixi nayaan ee ku aadan u gurmadka qaxootiga Yemen ka soo qaxaya.
Gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa balan qaaday in dadaalka u gurmadka dadka qaxootiga ah ay sii wadayaan mar walbana u heelan yihiin garab istaaga dadka tabaalaysan. In taas ka dib waxa la gudo galay wareejintii lacagta waxaana lacagta oo dhamayd 50,000$ oo kaash ah lagu wareejiyey gudoomiyaha gudiga gurmadka qaxootiga Yemen heer Puntland , Sh Axmed Yuusuf Daad.
Gaba gabadii munaasabada ayaa waxaa soo xiray gudoomiyaha gudiga gurmadka qaxootiga yemen Sh Axmed yuusuf daad wuxuuna uga mahad celiyey gudi bad baadinta qaxootiga soomaaliyeed ee Muqisho deeqdaan ay soo gaarsiiyeen.
Gudoomiyaha ayaa tilmaamay ilaa hadda in ay soo gaareen dekkeda Boosaaso dad ku dhow 16000 kun oo qof. Xeradaana hadda ay ku jiraan dad gaaraya 2000 oo qof , lacagtaana ay rari karto 600 oo qof .
Ugu danbayntii ayaa Sh Axmed Yuusuf Daad u duceeyey dhamaan dadka soomaaliyeed ee wax ku bixiyey u gargaarida walaalohooda soomaaliyeed , tilmaamayna wali in ay arrintu tahay faanoole fari kama qodna.